PDF ဖိုင်တစ်ခုကို Adobe နှင့်ဘယ်လိုချုံ့မလဲ Martech Zone
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အဘို့ငါကြီးစွာသောအသုံးချခဲ့သည် ကျွန်ုပ်၏ PDF ဖိုင်များကိုချုံ့ရန် third-party tool တစ်ခု အွန်လိုင်းအသုံးပြုရန်။ မြန်နှုန်းသည် online ၏အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် PDF file တစ်ခုကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကို hosting လုပ်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်သည်ထို compressed သေချာစေရန်လိုသည်။
အဘယ်ကြောင့် PDF ကို compress?
Compression သည် megabytes မြောက်မြားစွာသောဖိုင်တစ်ခုကိုယူဆောင်။ ၎င်းကို kilobytes ရာဂဏန်းအနည်းငယ်အောက်သို့လျှော့ချနိုင်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကလွယ်လွယ်ကူကူရှာဖွေနိုင်သည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ download လုပ်နိုင်သည်။ အီးမေးလ်မှပူးတွဲ။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် client များက PDF compression အတွက်မည်သည့် setting သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားမေးမြန်းသည်။ သို့သော် compression နှင့် export settings အတွက်ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သောကြောင့်မည်သည့်နေရာတွင်စတင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်ရိုးရိုးသားသားမသိပါ။ အကယ်၍ သင်သည် CCITT, Flate, JBIG2, JPEG, JPEG 2000, LZW, RLE နှင့် ZIP compression ဆက်တင်များကိုလိုလားပြီးနားလည်ပါက၎င်းကိုသင်သေချာတွက်ဆနိုင်သည်။ ဆောင်းပါးတွေအများကြီးရှိတယ်။
ငါအစားငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ရန် compression tool ကိုသုံးပါ။ ကျေးဇူးတင်စရာ, Adobe ကပဲအဲဒီကမ်းလှမ်း!
PDF ကို Adobe Acrobat နဲ့ဘယ်လိုချုံ့မလဲ
ငါမသိတာကငါ့ပဲ Adobe က Creative Cloud PDF လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်အရ Adobe Acrobat တွင် PDF ဖိုင်များကိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက်တည်ဆောက်ထားသော compression tool တစ်ခုပါဝင်သည်။ အကယ်၍ သင် Acrobat ကို download လုပ်ပါကသင်၏ PDF ကိုအလွယ်တကူချုံ့နိုင်သည်။
PDF ကိုဖွင့်ပါ Acrobat DC က.
အဆိုပါဖွင့်ပါ PDF ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ PDF document ကိုချုံ့ရန် tool တစ်ခု။
ရှေးခယျြ ကိရိယာများ> PDF ကို Optimize သို့မဟုတ်လက်ျာလက် panel ကမှ tool ကို click လုပ်ပါ။
ကို Select လုပ်ပါ ဖိုင်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချ ထိပ်မီနူးထဲမှာ။
အစုံ Acrobat ၏သဟဇာတ ဗားရှင်းကိုနှိပ်ပြီး OK ကိုနှိပ်ပါ။ ပုံမှန်မူကွဲမှာဖြစ်လိမ့်မည်
ကို Select လုပ်ပါ အဆင့်မြင့် Optimization image နှင့် font compression သို့မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ရန်ထိပ် menu တွင်။ သင်ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်ပြီးပါက OK ကိုနှိပ်ပါ။
ရှေးခယျြ File> Save As။ လက်ရှိဖိုင်ကိုပြန်လည်ရေးကူးရန် (သို့) PDF အရွယ်သေးငယ်သည့်ဖိုင်အသစ်ကိုအမည်ပြောင်းရန်ဖိုင်အမည်တူရမည်။ တည်နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး Save ကိုနှိပ်ပါ။
PDF ကို Adobe Online နဲ့ဘယ်လိုချုံ့မလဲ
သငျသညျတခုရှိသည်ဆိုလျှင် Adobe က Creative Cloud သင်၏ PDF များချုံ့ရန် Adobe Acrobat ကို download လုပ်စရာမလိုပါ။ Adobe ၌သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အွန်လိုင်းကိရိယာတစ်ခုရှိသည်။
PDF ကို upload တင်ရုံသာ Adobe က၎င်းကို compress လုပ်ပြီး download လုပ်လိမ့်မည်။ လွယ်ကူပါတယ်။
PDF ကို Online မှာချုံ့ပါ
Tags: Acrobat DCAdobeAdobe AcrobatAdobe ဖန်တီးမှုမိုcloud်းတိမ်ကိုစီးAdobe အွန်လိုင်းကန ဦးpdf ချုံ့ချုံ့ setting များကိုဖလိတ်JBIG2jpegJPEG, 2000LZWpdfpdf ချုံ့RLE